January 2017 - Ibsaa Jireenyaa
January 28, 2017 Sammubani 2 comments
Duraan dursee hanna jechuun wanta tokko osoo abbaan hin argin dhoksaan jalaa fudhachuu jechuudha. Hanni dhoksaa qofaan kan rawwatamuu osoo hin ta’in humnaanis abbicha dirqisiisuun wanta tokko irraa saamudha. Dhugumatti hanni hojii fafee fi gadhee keessaa isa tokkoodha. Namni hojii akkanaa keessatti hirmaatu salphataa fi hoonga’aa ta’a. Namoota meeqatu sababa hannaatin mana hidhaatti shamaa jiru. Wanti mana hidhaa kana caalu keessi isaa gubachuu fi rakkachuudha. Yeroo hundaa gadi aantummaan isatti dhagahama. Hojjachuun sammuu ofii bashanansiisu dhiise gatii tokko malee qabeenya namaa saamun sammuu fi jireenya ofii dhiphisa. Read more
January 21, 2017 Sammubani One comment
Torbaan darbee kaayyoon keenya maal akka ta’e murteessinee turre. Kaayyoo keenya erga murteessine booda milkaa’inni keenya maal akka ta’e tarreessinee jirra. Rabbiin qofa gabbaruun karaa milkaa’innaa fi gammachuu hundaa bana. Teepha fi sakallaa gabrummaa namarraa kaasun faaya bilisummaa fi gammachuu namatti dira. Salphinni kan nama haguugu yommuu Rabbiin ala wantoota biraatiif gadi jedhanii fi bulaniidha. Rabbiin qofa gabbaruun rizqii (soorata) ni bal’isaa malee hin dhiphisu. Osoo sooranni namaa xiqqaa ta’eeyyu keessi isaa gammachuun kan guuttameedha. Namoonni yeroo baay’ee soorataaf dhiphachuun kaayyoo guddaa uumamaniif dagatu. Kuni immoo milkaa’inna fi gammachuu ganda lamaanitu akka dhaban isaan taasisa. Jireenya addunyaa tanaa garmalee jibbanii hundeema tan dhiisaniis miti. Akkasumas garmalee jaallatanii hundeema itti maxxananiis miti. Madaala kaa’ufii barbaachisa. Read more
Maal Gochuu danda’aa?
January 18, 2017 Sammubani 4 comments
Barruun tuni barreefamoota gaggabaabo fuula fesbuuki Jireenya Badhaatu irraa walitti qabamte.
Halkan rafuu hin dandeenye maal gochuu danda’a?
Hirribni qananiiwan Rabbiin ilma namaa irratti oole keessaa isa tokkodha. Hirriba dhabuu yookiin baay’isanii rafuu irraa kan ka’ee dhukkuboonni baay’een babal’atanii argamu. Kanaafu hirriba waliin yoo rakkoo qabaatte, maal gootaa? Tarkaanfiwwan kanniin hordofi.
1: badii fi cubbuu irraa dheessi. Wanti hanga cubbuu fi badii sammuu namaa quuqu fi cinqu hin jiru. Namni badii fi wantoota fokkuu raawwatu halkani guyyaa boqonnaa hin argatu. Wanti guyyaa hojjataa oolte, halkan sammuu kee quuqu fi jeequn hirriba sirraa ari’u. Kanaafu lakk.1ffaan karaan hirriba gaarii itti argatan, badii irraa dheessudha. Filmii fi saala faallaa waliin akkuma feete ta’uun yoo hirriba dhabde, mataa kee malee eenyullee hin komatin. Read more
Dhalli namaa jireenya keessatti kaayyoo adda addaa qaba. Milkaa’innaa fi gammachuu argachuuf halkanii guyyaa battisa. Kaayyoo ol’aana bocatee fi galmaan gahee of gammachiisu barbaada. Kaayyoo adda addaa qabaachu fi milkaa’inna adda addaa galmaan gahuun addunyaa teenya ijaara, wanta haarawa itti dabala. Ilmi namaa uumaman wanta haarawa hojjachuun guyya guyyaan of gammachiisu barbaada. Garuu wanti inni hojjatu kuni karooranii moo karoora malee? Kayyoo wayiitif hojjata moo kaayyoo malee oli gadi battisa? Kuni jireenya keessatti murteessadha. Kaayyoo akkamituu ilma namaatiif gammachuu fi milkaa’inna itti fufaa fiduu danda’aa? Kaayyoon hundi gammachuu fi milkaa’inna yaaddame hin fidu, mitiree? Kaayyoo jireenya keenya maal akka ta’e itti yaanne beeknaa? Moo akkanumatti kaayyoo malee jiraannaa? Read more
January 8, 2017 Sammubani 5 comments
Torbaan darbee dargaggoonni akkamitti fi maaliif karaan akka jalaa bade eerre turre. Har’a immoo Insha Allah, nama karaan jalaa bade akkamitti akka karattı akka deebi’uu danda’u ilaalla. Dhugumatti, ilmi namaa sababa adda addaa irraa kan ka’e dukkana jireenyaa keessatti baduun jireenya gadadoo gaggeessu danda’a. Namni tokko jireenya ofii moo’atuuf, gammachuu fi milkaa’inna argatuuf gaafilee armaan gadii deebiisuuf tattaafachuu qaba. Isaaniis: Read more